mardi, 07 juin 2016 23:42
Antsirabe : Malaina manangan-tsaina ny mponina
Hatreto dia tsy mbola marisika amin’ny fananganan-tsaina ny mponin’Antsirabe. Tsy fantatra ny antony na dia efa namoaka fanambarana aza ny teo anivon’ny Prefektiora fa ny alatsinainy 06 jona no hanombohan’ny fananganan-tsaina.
mardi, 07 juin 2016 22:58
Sambava : Ny tanora sy ny tsy fananan’asa
Napetraka tamin’ny fomba ofisialy androany aty Sambava ny SRIE (Système Régional d’Information sur l’Emploi) izay sampana iray hifanojoan’ireo orinasa ary ny tanora izay hanamora ny fampananan’asa ho an’izay mitady asa.
mardi, 07 juin 2016 15:30
Nanaitra ny tranga niseho tao amin’ny seranam-piaramanidina Toliara ny alatsinainy 6 jona. Hiara-handray sidina iray hiazo an’Antananarivo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny zanany lahy, Maika Ravalomanana, ny minisitry ny jono sy ny harena an-dranomasina Gilbert François, ny minisitry ny kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana Rabenirina Jean Jacques, ary ny tale iray eo anivon’ny fiadidian'ny Repoblika.
mardi, 07 juin 2016 14:54
Mahajanga : Hampiantrano ny lalao ASOIMI nasionaly 2016
Ny tanànan’i Mahajanga no hampiantrano ny lalao ara-panatanjahantena iraisan’ireo mpiasam-panjakana manerana an’i Madagasikara na ny ASOIMI (Association des Omnisports Inter-Ministériels) andiany faha-16, hatao ny 24 aogositra hatramin’ny 04 septambra 2016.
dimanche, 05 juin 2016 18:22
Antsirabe: zaza efa teraka dia novonoina ary nariana
Efa biby tanteraka ny olona. Nahitana fatin-jazakely ny teo amin’ny kianjan’ny Piste Vatofotsy ny atoandron’ny Zoma 03 jona, tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany tany ho any. Miaramila sendra hivalan-drano teo amin’ny toerana somary fanarian’ny olona fako no nahita zavatra nifonofono nitangoronan’ny lalitra no taitra. Nojereny ka zazakely efa teraka ary toa novonoina ilay izy. Niantso ny manodidina avy hatrany ranamana ary vetivety dia vory ny olona ka niantso ny tompon’andraikitry ny fokontany ary ireo no nampandre ny BMH sy ny Polisy. Tsy fantatra moa na tamin’ny fotoana ahoana no nahatongavan’io fatin-jaza io ka dia nandray fepetra ny polisy nampandevina ilay razana kely. Tsipaipaika nataon’ny fokonolona no nividianana lamba namonosana izany ary dia nalevin’ny mponina teo amin’ny fokontany tsy lavitra teo ihany ny razana.
Ambatondrazaka: Marisarisa ny fandriam-pahalemana
Lasibatra ireo mpiompy akoho amam-borona. Tohanan'ireo jiolahy Vato lehibe ny varavaran'ny trano fonenana dia avy eo izy ireo mangalatra ireo biby fiompy ao ampisoko. Samy nisehoan'izany tao amin'ny fokotany Madiotsifafana sy Atanifotsy ny alakamisy lasa teo. Ankoatr'izay mitondra faisana ihany koa ireo mpianatra mipetraka irery. Raha vao lasa mianatra izy ireo dia vaky ny trano ka lasan'ny jiolahy avokoa ny vilany sy ny kojakoja ao antokatrano. Mila mametraka paikady mahomby arak'izany ny mpitandro ny filaminana mba hiadanana ny valalabemandry.
dimanche, 05 juin 2016 17:44
Mitombo isa ny mpivarotra amoron-dalana. Mihabetsaka ankehitriny ny mpivarotra amoron-dalàna eto Ambatondrazaka. Ireo mpivarotra lamba tonta no maro an'isa amin'izy ireo. Manomboka miakatra ny vokatra any Alaotra ka saika lasa manenjika tsena any ireo mpivarotra avy ao Antananarivo. Manodidina ny 500 ariary dia efa mahazo akanjo. Raha any amin'ny tsenabe vao mieritreritra haka toerana hivarotana ireo mpivarotra aty Ambatondrazaka, efa saika mameno ny ankamaroan'ny tsena aty an-toerana ireo mpivarotra avy any Antananarivo. 90 isan-jato ny mpivarotra amoron-dalana dia avy any Antananarivo avokoa.
dimanche, 05 juin 2016 17:37
Faha 20 taona ny Rotary club lac Alaotra
Nomena lanja ny fahasalamam-bahoaka. Mitohy hatrany ny fanamarihana ny faha 20 taonan'ny Rotary club Lac Alaotra. Notolorana Panneau solaire ny CSB2 Ilafy sy Andranokobaka, miampy fanafody sy kojakoja fiterahana. Hihazo ny kaominina Atsangasanga sy Manakambahiny andrefana izy ireo ka fanafody sy kojakoja ilaina amin'ny fiterahana no omena ny toerampitsaboana any an-toerana.
vendredi, 03 juin 2016 10:54
Sekolin’ny Polisim-pirenena Antsirabe : Vita ny famindram-pahefana teo amin’ny tale mpitantana
Napetraka tamin’ny fomba Ofisialy ny Tale vaovao hitantana ny ENIAP Antsirabe ka ny CPP Andrianarivelo Yves Remi indray no handimby ny Controleur Général de police Tolojanahary Zenit Mahafaly, izay nitantana izany teo aloha.
mercredi, 01 juin 2016 23:56
Fiaraha-miasa : Miaramila mpianatra amerikana miisa 61 tonga eto Madagasikara
Tonga eto Madagasikara ireo miaramila mpianatra avy any Etazonia miisa 61 anisan’ny mahay indrindra avy ao amin’ny sekoly manofana ireo miaramila amerikana fiandry ROTC avy amin’ny oniversite 56 samihafa hanatanteraka fiofanana mikasika ny fifandraisana ara-kolontsaina sy fiteny (CULP). Fanindroany izao no hanatanterahana ity fandaharanasa CULP ity eto Madagasikara. Tamin'ny 2015 dia nisy mpianatra miaramila manodidina ny 30 niaraka tamin’ny miaramila malagasy.